မောငျ(စှယျစုံကမျြး): ဖုန်းတွေမှာ Website က Download Links မပါတဲ့ Video တွေကို Mozilla Firefox နဲ့ Add-ons လေးသွင်းပြီး အလွယ်ဒေါင်းနည်း
Download Links မပါတဲ့ Website က Videos တွေ ဒေါင်း ရတာ အရမ်း အဆင်ပြေလို့ ကျနော် ဒီနည်းလေး ရေးတင်လိုက်တာပါ။ ဖုန်းသမားတွေ အတွက် တကယ်ကို အသုံးဝင်စေမှာပါ။ မော်ဇီလာမှာ Add-ons ထည့်ပြီး Download Liinks တွေမပါတဲ့ Video တွေမှာ Download Icon လေး တက်ပြီး Videos တွေအလွယ်ဒေါင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ပြီး ကျနော်အကြိုက်ဆုံးအချက်က မြန်မာဆိုဒ်မှာ တင်ထားတဲ့ မြန်မာစာတန်းထိုး Videos တွေက ဖိုင်ဆိုဒ်အရမ်းကြီးပါတယ်။ 1GB ကျော် 1.5GB ကျော်ထိရှိတာများတယ်။ အဲလို Video တွေကို အခု Firefox Add-ons နဲ့ ဒေါင်းလိုက်ရင် ဖိုင်ဆိုဒ် 400MB လောက်ပဲ ကျန်တဲ့ထိ Auto ဖိုင်ဆိုဒ် သေးသွားစေပါတယ်။ HD Quality ကတော့ လုံးဝမကျပါဘူး။
ကျနော် အဲဒီအချက်ကို တကယ်ခိုက်သွားတယ်ဗျာ။ Youtube က Video တွေတောင် Mozilla Firefox ကနေဖွင့်ရင် ဒေါင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Android ဖုန်းသမားတွေအတွက် တကယ် အကြိုက်တွေ့စေ မှာပါ။ အောက်မှာ ကျနော် အဆင့်မကျော်ပဲ ပုံနဲ့ တဆင့်ချင်း တင်ပြထားပေးပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားရင် ပုံကြည့်ပြီး လိုက်လုပ်ကြပါဗျာ။
အရင်ဆုံး မိမိ် ဖုန်းမှာ Mozilla Firefox Bowser မရှိသေးရင် ဒီလင့်မှာ ၀င်ဒေါင်း လိုက်ပါ။ ပြီးရင် အောက်က ပုံကိုကြည့်ပြီး တဆင့်ချင်း လိုက်လုပ်လိုက်ပါ။ 100% OK တယ်နော် အာမခံတယ်။
အရင်ဆုံး Mozilla Firefox ကိုဖွင့်ပါ။ ပြီးရင် ဖုန်းရဲ့ Back ရဲ့ နောက်တဖက်က Optains Key ကို နိပ်ပါ အောက် က ပုံလို မြင်ရပါမယ်။
ပြီးရင် Tool ကို နိပ်ပါ။
Add-ons ကိုဆက်နိပ်ပါ။ ကောင်ကပုံလို မြင်ရပ်မည်.။ ပြီးရင် Your Add-ons ကို နိပ်ပါ။
Add-ons ရဲ့ Website ထဲရောက်သွားပါမယ်.။ အောက်ကပုံမှာကြည့်လိုက်ပါ။ Firefix Add-0ns ရဲ့ အောက်မှာ Scarch ဘောက်လေးတခုရှိပါတယ်.။ အဲမှာ Flash And Video Downloader လို့ရေးပြီး. ညာဘက်ကမျှားကိုနိပ်လိုက်ပါ။ ပုံမှာ ကျနော်ပြထားပါတယ်။.
Search မှာရှာပြီးနောက် Result တွေကျလာပါမယ်။ အပေါ်ဆုံးက Flash Video Downloader - YouTube Full HD Download ကို နိပ်လိုက်ပါ။
ပြီးရင် အောက်ကပုံမှာ ကြည့်လိုက်ပါ။ အပေါင်းလဏ္ခာနဲ့ Add to Direfox ကိုနိပ်ပါ။ Downloading Add-ons ဆိုပြီးစာတတ်လာပါမယ်။ ပြီးရင် ဘာမှမလုပ်ပဲ ဘောက်တခုတတ်လာတဲ့အထိ မိနစ် အနဲငယ် စောင့် ရ ပါမယ်။
မိနစ်အနည်းငယ်စောင့်ပြီး ဘောက်တခုတတ်လာရင် ညာဘက်က Install ကိုနိပ်ပေးပါ။
ပြီးရင် Install Complete ဖြစ်လာရင် အောက်ကပုံလို ပြလာပါမယ်. ။ Restart to complete Changes ဆိုပြီး ဘောက်တခုတတ်လာမယ်။ Restart ကိုနိပ်လိုက်ပါ။
Mozilla Firefox လာရင် Tool ထဲပြန်ဝင်ကြည့်ပါ. အောက်ကပုံလို Add-ons လေးကို မြင်နေရပါပြီး။ ဒါဆိုရင် အောင်မြင်ပါပြီ။ အောက်မှာ ကျနော် Website က Video တွေ လက်တွေ့ ဒေါင်းပြထားပါတယ်.။
Download Links တွေမပါတဲ့ viooz.co ဆိုဒ်ကနေ လက်တွေ့ ဒေါင်းပြထားပါတယ်။
Video Play ရင် ဘယ်ဘက်အောက်က မျှားလေးက Auto တတ်လာပါတယ်။ မျှားလေးနိပ်ပြီးဒေါင်းရုံပဲ။
မူရင်းက 700MB ကျော်လောက်ရှိတာကို Video Quality မကျပဲ 300MB ထိ ဖိုင်ဆိုင် သေးကျသွားပါတယ်။
Download ဆိုတာနိပ်ရုံနဲ့ ဒေါင်းနေပါပြီ.။
ဒီလောက်ဆို အားလုံးသဘောပေါက်လောက်ပြီထင်ပါတယ်။ Computer ကနေ IDM ထည့်ထားသလိုပဲ Video Play တာနဲ့ Download Icon လေး Auto တက်နေမှာ့ဖစ်ပါတယ်။
Author Zaw Min Than at 3:25:00 AM